GARE ROUTIERE MAKI
Nitsidika ireo niharam-boina tamin’ny 26 jona lasa teo teny Mahamasina
Dian-dRajoelina any Ejipta
Misy amin’ireo mpitia baolina kitra Malagasy no manahy fa hampireven’ny filoham-pirenena mialoha ny lalao hatrehany
Nomena ny tsy miankina ny fitantanana ny toby fiantsonana Maki etsy Andohatapenaka.
Orinasa cotisse no nahazo azy ary izy no hitantana ilay toby manomboka izao. Efa mihahita anefa ny gaboraraka sy ny loto eny Andohatapenaka ka mitaky ny handraisana fepetra hentitra ny minisitry ny fitaterana. Efa mihabetsaka koa ireo mpivarotra sakafo tafiditra ao amin'ny toby fiantsonana ka manomboka manaratsy endrika ny fotodrafitrasa
TEZITRA IREO KAOMPANIAN-TSOLIKA
Manomboka tezitra amin'ny filoham-pirenena ireo kaompanian-tsolika taorian'ny fanambarana nataony tamin'ny fanamarihana ny 100 andro. Tsy zakan'izy ireo ny hampidinana ny anjara tokony ho an'ny kaompanian-tsolika. Fantatra fa mitady ny tsy hihaona amin'ny filoha izy ireo. Ny Gpglss ihany koa dia milaza ho matahotra ny tsindry mety hataon'ny kaompanian-tsolika ireo.
OLONA 8 NOSAMBORINA TENY ANOSIZATO
Olona valo no nosamborina teny Anosizato sy ny manodidina. Izy ireo dia voarohirohy tamin’ny famonoana mpivarotra « pate jaune » amin’ny ambongadiny eny Anosibe. Notafihana tao an-tranony ilay rangahy ary novonoina ho faty. Nampiasa fiara nofaina ireo olon-dratsy tamin’io fotoana io ary izany no fitaovana nentina nitsoaka. Nosamborina koa ny mpamily io fiara io.
ZANDARY IRAY NIDOBOKA AM-PONJA
Zandary iray no nidoboka am-ponja rehefa voarohirohy tamin’ny halatra lavanila. Milanja 62 kilao izany ary ny porofo rehetra dia nitodika tany amin’ity mpitandro ny filaminana ity avokoa. Lafo ny vidin’ny lavanila ary lasa mirona amin’ny halatra momba izany ny ankamaroan’ny olona izay tsy vitsy no efa lasibatry ny fitsaram-bahoaka noho io antony io. Izao koa anefa dia hatramin’ny zandary no tafiditra amin’ny halatra.
SAMBO KELY NAMONO OLONA
Olona telo no maty navadiky ny sambokely omaly. Avy any Befotaka izy ireo ka saika hihazo an’Analalava no sendra ilay loza. Olona efapolo no nentin’ity fitaovana fitaterana an-dranomasina ity. Raha ny fanazavana hatreto dia nidona tamin’ny hazo naniry ilay sambo ary nitarika ny fivadihany izany. Nisy koa anefa no nilaza fa misy fombafomba tsy narahina ka nitarika io tranga io.
ZANDARY MATY NITIFI-TENA
Zandary iray kilasy voalohany no maty nitifi-tena tao Morafenobe. Miasa eo anivon’ny poste avancé » ao Ankalalo izy raha araka ny fanampim-panazavana azo. Izy irery no tao an-tokantranony tamin’io fotoana io satria tsy tao ny vady aman-janany. Nisokatra avy hatrany ny fanadihadiana momba ity raharaha ity.
RNM SY TVM
Hisokatra tanteraka ho an’ny haino aman-jery tsy miankina ny TVM sy ny RNM mandritry ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety. Eo koa no hahitana raha mbola misy ny firaisankinan’ny mpanao gazety, sehatra iray izay tena nopotehin’ny politika tao anatin’ny fotoana fohy. Ny tsapa dia miezaka ihany ny holafitry ny mpanao gazety mamerina io firaisankina io kanefa mbola asa izay ho vokany.